यस गाइडको साथ फोटोशपमा फिल्टरहरू कसरी प्रयोग गर्ने पत्ता लगाउनुहोस् | क्रिएटिव अनलाइन
फोटोशप खोल्नुहोस्, फिल्टर ट्याब। समान जब हामी सम्पादन गर्दछौं हामी यो शोषण गर्छौं कि यो हाम्रो लागि कसरी कार्य गर्दछ भनेर राम्ररी नबुझीकन र कहिलेकाँही हामीले छोडिदिन्छौं किनकि हामीले अपेक्षित प्रभाव राम्रोसँग पाउँदैनौं। अहिले सम्म, तिनीहरू ध्यान नखोल्न सक्षम भएका छन् र उनीहरूले गर्न सक्ने क्षमतालाई ध्यानमा राखिएको थिएन। विशेष गरी यदि हामी ग्यालरीको बारेमा कुरा गर्छौं। (फिल्टरहरू र फिल्टर ग्यालरी) मा फोटोशपमा फिल्टरहरू कसरी प्रयोग गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्।
फिल्टरहरूले तपाईंलाई विभिन्न शैलीहरू जस्तै कलात्मक, प्रकाश विकृति, छविहरूमा प्रभाव लागू गर्न अनुमति दिन्छ, आदि र केवल पूर्वनिर्धारितबाट मात्र, हामी तिनीहरूलाई बाह्य मोड्युलहरूबाट आयात गर्न सक्दछौं। यी फिल्टरहरू पूरै कागजातमा लागू गर्न सकिन्छ विशेष क्षेत्र वा तहमा। अवश्य पनि, यसको पिक्सेल हुनुपर्दछ, यो खाली तह हुन सक्दैन।
यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले हिम्मत गर्न प्रयोग गर्नुभयो तर राम्रो परिणाम देख्नुभएन भने, यो पनि तिनीहरूको कन्फिगरेशनको कारण हुन सक्छ। केही फिल्टरहरू सिधा पूर्वावलोकनमा बुझिन्छ केवल तिनीहरूलाई चयन गर्नुहोस् तर अन्य तपाईंले कन्फिगर गर्नु पर्छ परिवर्तन को एक प्रशंसा गर्न चाहानुहुन्छ।
ग्यालरीमा प्रवेश गर्नु अघि, जहाँ हामी धेरै फरक प्रभावहरू फेला पार्दछौं, हामी विकल्पहरूमा जान्छौं जुन अलि अलि तल आउँछ र यसले ट्यूटोरियल पूरा गर्दछ।
परिणाम हेर्नका लागि निश्चित गर्नुहोस् कि विकल्पहरू 'पूर्वावलोकन' र 'शो प्रतिबन्धहरू' जाँच गरिएका छन्।
1 फिल्टर> अनुकूली चौडा कोण
1.1 प्रतिबन्ध विकल्पहरू
2 लेन्स सुधार
3 तरिकार गर्न विकल्प
4 गायब बिन्दु
4.1 छविलाई परिमार्जन र रूपान्तरण गर्नुहोस्
5 फिल्टर ग्यालरी
फिल्टर> अनुकूली चौडा कोण
यो फिल्टर फराकिलो ए le्गल लेन्सको लागि फोटो खिच्नमा त्रुटिहरू सुधार गर्न डिजाइन गरिएको हो। सामान्यतया तिनीहरू मध्ये केही मर्मत गर्नुहोस्। फोटोशपको नयाँ संस्करणहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नवीनता (यदि तपाईंसँग CS6 वा CC छैन भने, तपाईंसँग यो हुनुहुन्न) भनेको यो हो कि तपाईं छविको विशेष भागहरूमा काम गर्न सक्नुहुनेछ र विकृतिहरूलाई म्यानुअल तरिकाले सच्याउन सक्नुहुन्छ। यसैले, यदि दोष मात्र एक खास क्षेत्र मा छ भने, तपाईले त्यो क्षेत्र बाहेक अरु केहि पनि परिमार्जन गर्नु पर्दैन।
यदि तपाइँ काम गर्नुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि विकल्पमा: 'परिप्रेक्ष्यर हामी परिमार्जन गर्दैछौं, हामीसँग धेरै प्रभावहरू हुनेछन् जुन हामी छविमा दिन्छौं। यदि तपाईं पागल जस्तो यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि कसरी छवि एक अतिरंजित तरीकामा विकृत भयो। तर, यदि तपाइँ घुमाउन वा जुम गर्न आवश्यक छ भने, केहि मापदण्ड जस्तै बाली तत्व वा फोकल लम्बाइमा ट्याप गर्नुहोस्। यहाँ तपाईं कसरी वास्तविक छवि देख्नुहुनेछ र यसको मापदण्डलाई थोरै पुन: प्राप्त गर्दै कसरी हुनेछ भन्नेको उदाहरण यस प्रकार छ: स्केल: १०103, फोकल लम्बाई: 3,01.०१ र बाली फक्टर: .8,52..XNUMX२.
मूल छविको मुख्य वस्तुबाट दूरी छ, जुन यस अवस्थामा घोडा हो। अब हामी एउटा एडाप्टिभ वाइड ए with्गलको साथ देख्नेछौं।
के तपाई परिवर्तन देख्नुहुन्छ? कसरी छवि हाम्रो नजिक ल्याइएको छ र काटिएको छ? यो एक साधारण उदाहरण हो। परिप्रेक्ष विकल्पको बारेमा बनाइएको। त्यहाँ फिशिए, स्वचालित वा पूर्ण क्षेत्र सुधार पनि छ। Fisheye विकल्प धेरै पूर्ण हुन सक्छ किनकि म विस्तृत कोणको लागि भन्छु, फोटोग्राफी र spaciousness को कि थोड़ा विकृत प्रभाव दिनुहोस्। हाम्रो क्यामेराको साथ लिइएको तस्विर भन्दा बढि घुमाइएको रेखाचित्र कोर्दै।
बायाँका विकल्पहरूले तपाईंको फोटोमा अधिक प्रबन्धन योग्य बनाउँदछप्रतिबन्ध उपकरणको साथ एक तेर्सो रेखा पार गरेर तपाईंले यो देख्नुहुनेछ कि यो कसरी तपाईंको छविको घुमावलाई अनुकूलन गर्दछ मानौं कि यो चुम्बकीय गरिएको छ। जब तपाइँ माउस छोड्नुहुन्छ फिल्टरले बक्र सीधा गर्दछ। स्पष्ट रूपमा, छवि विकृत हुनेछ, विशेष रूपमा रूपरेखा द्वारा, जसले छविको अंश "हटाउनेछ"। यदि तपाईंलाई यो कसरी राम्रो देखिन्छ भन्ने मनपर्दैन भने, तपाईं यसलाई समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ, Ctrl + Z मा क्लिक गर्नुहोस् (म्याक Cmd + Z को मामलामा) पछाडि जानुहोस् वा ALT कुञ्जी प्लस बायाँ माउस क्लिक गरेर यो कार्य समाप्त गर्नुहोस्।
यो प्रतिबन्ध सहितको छविको उदाहरण हो।
यो धेरै आकर्षक लाग्दैन, हैन?। अब यसलाई मूल छवि अन्तर्गत राख्नुहोस् र अस्पष्टता घटाउनुहोस् वा केही क्षेत्रहरू हटाउनुहोस् जुन तपाईं ब्रशको माध्यमबाट वा छविको साथ मूल छविबाट रुचाउनुहुन्छ। ब्लेडि। मोडहरू, जुन तपाईं पहिले नै थाहा पाउनुहुनेछ यो अघिल्लो ट्यूटोरियलको बारेमा के हो। यो उदाहरण हो:
यदि हामीले माथि देखाइएको मूल छवि भन्दा पहिले देख्यौं भने, हामी यो परिवर्तनको नोटिस गर्दछौं कि त्यहाँ प्रतिबन्धको साथ यस सम्बन्धमा छ। घाँस, हिमाल र आकाश परिवर्तनका उल्लेखनीय अंशहरू हुन्.
उही बाटोमा अब हामी फिल्टर> लेन्स सुधारमा जान्छौंयस विकल्पले हामीलाई धेरै प्रिसेट प्यारामिटरहरू र शक्तिशाली समायोजनहरूको माध्यमबाट विचारहरू लिने क्रममा सुधार गर्न अनुमति दिनेछ।
यदि तपाईंको क्यामेरा उच्च-अन्त, कम-अन्त वा मिड-लोभमा छैन, जस्तै क्यानन १२०० डी, तपाईं यस उपकरणको साथ केही द्रुत समायोजनहरू लागू गर्न सक्नुहुनेछ। यस अवस्थामा तपाईले क्यामेराको मेक र मोडेल रोज्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईले खोज मापदण्डमा फोटो खिच्नु भएको थियो। यस तरिकाले तपाईं वास्तविक समयमा स्थापित सुधारहरू देख्नुहुनेछ।
यदि तपाईं अधिक बहुमुखी मापन लागू गर्न चाहानुहुन्छ, उदाहरणका लागि, फिशिए वा फराकिलो कोण परिप्रेक्ष्य पुनः प्राप्त गर्न, हामी 'कस्टम' को लागी अप्ट इन गर्न जानेछौं। हामीले ज्यामितीय विरूपण, ठाडो र तेर्सो परिप्रेक्ष्य, कोण र मापन समायोजित गरेका छौं हाम्रो फोटोग्राफी को लागी। निम्न छविहरूले प्रदान गरिएको परिणाम दिनेछ। प्रत्येक एक मा निश्चित र निश्चित सेटिंग्स को आवश्यकता हुनेछ.
यो आफैं प्रयास गर्नुहोस् र तपाईको नतीजाहरुमा टिप्पणी दिनुहोस् ताकि हामी तिनीहरु लाई मूल्या can्कन गर्न सक्दछौं, पक्कै पनि तिनीहरू म भन्दा बाहिर आउँछन्। यो एक ट्यूटोरियल हो, त्यसैले हामी अधिक विशिष्ट परिणाम दिन रोक्दैनौं किनकि हामी प्रत्येक उदाहरणका लागि धेरै समय खर्च गर्न सक्दछौं।
तरिकार गर्न विकल्प
यस फिल्टरले हामीलाई छविको ठूलो वा थोरै हदसम्म विकृत गर्न अनुमति दिँदछ यसमा विभिन्न रूपान्तरणहरू लागू गर्दै। दुबैbबिट र १ बिट्स प्रति च्यानल। पहिले तपाईले छाँटकाँट गर्न खोज्नु भएको तह चयन गर्नुहोस्, यदि तपाईं जहिले पनि गलत हुनुहुन्छ भने, ctrl + z (म्याकमा सेमीडी + z)। फिल्टर> लिक्विफाइमा जानुहोस् वा टाइप गर्नुहोस् Ctrl + shift + X (म्याकको मामलामा सेमीडी)।
यदि तपाईंसँग फोटोशप CS6 छ भने तपाईंले सबै सम्भावनाहरू देखाउन विकल्प 'उन्नत मोड' थिच्नु पर्छ। यदि यो सीसी हो भने, त्यहाँ कुनै समस्या हुनेछैन किनकि तपाईंसँग विकल्पहरू पहिले नै पूर्वनिर्धारितद्वारा चिन्ह लगाइनेछ।
बायाँ प्यानलबाट पहिले मोड / ताना उपकरणहरू देखाउनुहोस्। केहि उपकरणहरू जस्तै ह्यान्डहेल्ड वा जुम पहिले नै तपाईंलाई परिचित हुनेछ। तिनीहरू ठ्याक्कै त्यहा छैनन् जहाँ हामी रोक्दछौं। हामी पहिलो संग शुरू, अगाडी ताना: पिक्सेल अगाडि पुश गर्नुहोस् उपकरण को तस्विर तान्ने को रूपमा।
यसैले, छवि राम्रो देखिँदैन, नरम प्रकाश जस्तै यो एक ब्लेन्डिंग मोड लागू गर्नुहोस्.
दाँया पिनव्हील: घडीको दिशामा पिक्सेल रोटेशन गर्दछ। यदि तपाईं Alt थिच्नुहुन्छ (दुबै पीसी र म्याकमा) तपाईं परिक्रमण उल्टाउनुहुन्छ। Deflate: यसको नामले सुझाव दिए जस्तै यो डिफल्ट हुन्छ। त्यो पिक्सललाई केन्द्र तर्फ सार्छ। यसले छविलाई केन्द्रित बनाउँछ र जूम आउट भएको देखिन्छ। फुलाउनु: बरु, यसले पिक्सेलहरू मार्फत बाहिर धपाउँछ।
बायाँ धकेल्नुहोस्: पिक्सेललाई ट्रेस गरिएको क्षेत्रको बाँयामा सार्दछ जब उपकरण छवि तानिन्छ। यदि तपाईं दिशा उल्टाउन चाहनुहुन्छ भने, Alt थिच्नुहोस्।
यस प्रकार्यले तपाईलाई छविमा परिप्रेक्ष्य प्लेनहरू परिभाषित गर्न अनुमति दिन्छ परिवर्तन गर्न र पुन: निर्धारण गर्न। यी परिवर्तनहरू यसको परिप्रेक्ष्यको सम्मान गर्दै विशेष क्षेत्रमा गरिन्छ। सुचारू रूपमा चालु राख्नको लागि तीनवटा दिमागमा दिमाग राख्नुहोस्। यदि समायोजन आंशिक छ, तपाईंले सुधार गर्न चाहानुभएको छविको अंश चयन गर्नुहोस्। अवश्य पनि, यदि तपाईसँग कुनै त्रुटि छ भने तह नक्कल गर्नुहोस्, उल्ट्याउनका लागि र यदि परिवर्तन छवि को आकार को वृद्धि गर्दछ, तपाईको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्नुहोस्.
परिपक्व प्लेनको चार कोणहरू परिभाषित गर्न 'प्लेन प्लेन' उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं प्रत्येक ठाँउ मा क्लिक अंक राख्न। यदि निलो ग्रिड देखा पर्दछ भने यो ठीक छ। पहेलोमा यदि पोइन्टहरू मान्य छैन। त्यसैले यसको लागि बाहिर हेर्नुहोस्, किनकि तपाईं सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न।
'ग्रिड आकार' फिल्डमा एक मान प्रविष्ट गरेर विमान ग्रिडलाई अझ राम्रो बनाउनुहोस्। विमान चयन गर्न र परिमार्जन गर्न, सम्पादन प्लेन छनौट गर्नुहोस् र यसलाई तान्दै विमानमा क्लिक गर्नुहोस्।
छविलाई परिमार्जन र रूपान्तरण गर्नुहोस्
हराइरहेको पोइन्ट विन्डोमा तपाईं छवि वा यसको क्षेत्रहरू नक्कल गर्न सक्नुहुन्छ। भिजेको, पेन्ट गर्नुहोस् वा रूपान्तरण लागू गर्नुहोस्। जोनहरूको नक्कल गर्न स्ट्याम्प उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। उपकरण विकल्पहरू समायोजित गर्नुहोस्: व्यास, कठोरता (सफाई परिभाषित गर्दछ)। अस्पष्टता र सहि. निष्क्रिय गरियो: निम्नलिखित पिक्सेलको रूपरेखा र र colors्ग, छाया र बनावट बीच कुनै मिश्रण छैन। Luminance: पिक्सेलको ब्राइटनेसका साथ रूपरेखा मिसाइदै। खुल्ला: रंग, छाया र बनावटका साथ रूपरेखाको फ्यूजन।
सुरू गर्नका लागि तपाईले प्रयोग गर्न लाग्नु भएको लेयर छनौट गर्नुहोस्। हामीले फिल्टर ग्यालरीमा पहिले भनेको भनेको जस्तै जानुहोस्। पप-अप विन्डोमा तपाईं ती मध्ये कुनै छिटोमा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, पूर्वावलोकनमा पनि तपाईं जूम गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले परिवर्तन गरिरहनु भएको अझ राम्रो दृश्य पाउनको लागि।
तलको कागजात प्रतिमामा तपाईं नयाँ फिल्टरहरू कसरी थप्ने भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै बीचमा ओभरल्याप गर्न वा हटाउन यदि एक तपाईंलाई उपयोगी छैन। साथ साथै तपाईं केहि लुकाउन सक्नुहुन्छ यदि त्यो क्षणमा तपाईंको आँखा आइकनमा पूर्वावलोकन चाहनुहुन्न। म तस्विर थप्नेछु ताकि तपाईं विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यिनीहरू तपाई वास्तविक समयमा देख्न सक्नुहुनेछ र ती हेर्न सजिलो हुन्छ। तिनीहरूलाई धेरै कन्फिगरेसनको आवश्यकता पर्दैन र यसले तपाईंलाई तपाईंको फोटोग्राफीमा बहु प्रभावहरू पार्छ। तुलना गर्दै, यो सरल कन्फिगरेसनको साथ मोबाइल अनुप्रयोगको रूपमा हो जुन फोटोग्राफीलाई अर्को टच दिन्छ। छवि सेटिंग्स मा एक साधारण चिमटा पनि अनुप्रयोगहरु को स्पर्श नक्कल गर्न सक्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » यस गाइडका साथ फोटोशपमा फिल्टरहरू कसरी प्रयोग गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्
ग्राफिक र वेब डिजाइनरहरूको लागि आठ आश्चर्यजनक निःशुल्क संसाधनहरू
कसले प्रख्यात स्माइली फेस आइकन बनायो?